Ikhono ukudlala okungenani eyodwa insimbi yomculo ngesikhathi njalo baziswa kunoma imuphi umphakathi, ikakhulukazi abantu nge zizwakale kahle. Futhi njalo endaweni yomculo efanayo kuyinto isiginci noma upiyano. Funda indlela ukufunda ukudlala i-violin, kungenzeka yini kuphela nabafundisi abangomakad 'ebona umculo. Ungenza ngokwakho futhi, uma ubuza ocacile, ukukhombisa ukuzimisela kanye ukulandela izimiso ezimbalwa ezilula.
Ubudala - akuyona kwesithiyo
isikhathi ezizwelayo ukufunda ukudlala i-violin kuba engu-nomlawuli ingane zasenkulisa - iminyaka 5-6. Amakilasi uqale kule nkathi izoba nemiphumela esheshayo, kodwa kuphela uma isisusa eliphezulu kwengane khona namakhono athile futhi ezibukhali.
Umuntu omdala izinto eziyisisekelo ukudlala i-violin ungakwazi kahle ngempumelelo uma okubhekiswe ocacile, ngenkuthalo wahlanganyela nangalokujulile ngempela libhekisela the impumelelo. Yiqiniso, wafunda ukudlala ivayolini kunzima kakhulu kangakanani. Ngenxa yalesi sizathu, ukuqeqesha isikhathi omdala kuyodingeka ichithe ama eziningi.
Ukwenza isinqumo mayelana nini futhi kanjani ukuze ufunde ukudlala i-violin wedwa, kufanele ucabangele kwalezi zimo ezilandelayo:
amalunga omzimba izingane nezimo ezingaphezu kuka abadala, kodwa omdala, oye wanquma ukufunda i-violin, ugqozi ephakeme kanye namandla;
amakhono amasha akhiwa ngokushesha futhi ukunamathela uqine kokuthile umntwana, kodwa nomuntu omdala okwaziyo kanjani inkuthalo ngaphezulu, bezama ukuthola umgomo, ngokuzimela kokunquma isidingo amahora ukubuyekeza;
izingane ngokuvamile encishisiwe kucabanga ngalokujulile, azivamile ukwazi ngokwanele ukuhlola impumelelo yabo, abadala kanye ukuqaphela ukuthi sesivele izuzwe, futhi ngalokho kusamele sisebenze.
Ngakho, ukufunda ukudlala i-violin, njengoba sengimdala, kungenzeka isinxephezelo abawayeka yobuntwana ukuze balukhulume ngokugcwele insimbi.
Ingabe, kabusha, mi ...
Uma ucabangela umbuzo kanjani ukufunda ukudlala i-violin kusukela ekuqaleni, kufanele uhlinzeke ukuthuthukiswa esiyisibopho notation emculweni futhi solfege - ubuciko Ukufundwa amanothi buviyoviyo kubo. ukuqeqeshwa indlebe amakilasi ukuthuthukisa i indlebe umculo, okuyilona elidingekayo ukuze udlale wezinsimbi zomculo ezinezintambo. Oluphethe solfege umculi Ungadlala izwi Ihubo noma ngokwengqondo, hhayi ukulahlekelwa ke.
Lokhu kuyikhono ibaluleke kakhulu iphimbo efanele ngesikhathi ukusebenza imisebenzi zomculo. Kufanele bahlanganyele okungenani kabili ngesonto, bese amaphuzu ukufunda kuyoba lula njengoba izincwadi abavamile.
Ukufunda ukudlala ivayolini - akuyona inqubo lula. Ovusa ithuluzi umsindo akhishwa ngokusebenzisa ngokunyakaza ikakhulukazi - vibration, okuyinto ibangelwa ukunyakaza olukhethekile esihlakaleni noma indololwane-DRM. Futhi eqinisweni, futhi kwelinye icala, kuthatha omningi ukuqeqeshwa, ukuvumela ukuba kahle inqubo ukunyakaza khulula, sibonga ngalo violin lihlabelela amadlingozi, izwi ongenakulibaleka ngokuslayida iminwe yakho phezu umculi fingerboard.
Kanjani ukuze ufunde ukudlala i-violin? Ngo arsenal of violinists professional izindlela eziningi ngempumelelo ukukhiqizwa umsindo. Ukuba yingcweti ngamunye kubo hhayi kuphela idinga amakhono athile, kodwa ukuqeqeshwa kanzima, amahora amaningi ukuprakthiza, isineke nokubekezela okungakanani.
Kanjani ukuze ufunde ukudlala i-violin? Ekuqaleni ukufunda ukudlala master violin pizzicato - umsindo akhishwa ngaphandle umnsalo kuphela iminwe yakho. Kulesi sigaba kubalulekile ukuze kuzuzwe lesifanele umunwe ukunyakaza on entanyeni, ekwakhiweni efanele izandla. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ephelele buciko lobuchwepheshe ngokubulawa udlala pizzicato amasu violin saqala ingacosha umnsalo.
Kanjani ukuze ufunde ukudlala i-violin? Ngisho umfundi omdala njengoba imikhiqizo lokuqala umnsalo kufanele akhethwe iphethini lelula izingoma futhi Rhythmic usebenza nabantu zezingane iculo nge bushelelezi, ijubane kokuphumula. Nge ngcono amakhono ukudlala i-violin, ungazama ukwenza izingcezu eziyinkimbinkimbi.
Ikhono violin akukaze kube ephelele. Ukwenza ubuciko amathalenta kanye nezifundiswa - umphumela amahora eside futhi kanzima umsebenzi ezazifundiswe nsuku zonke. Yiqiniso, ukuqeqeshwa kunikezwa izingane kalula, kodwa libonisa nesifiso esinamandla, intando nangokuzimisela, omdala, futhi, ungafunda ukudlala violin. Nakuba kuyoba nesikhathi esiningana kuso.
Indlela ukudlala isiginci umlamuleli: amathiphu namasu